I-model, dib ugu noqoshada tayo - Geofumadas
I-model, ku noqo tayo
Nofeembar, 2011 Microstation-Bentley, Leisure / waxyi
Horumarka teknoolajiyada ee sayniska kombiyuutarku waa mid adag, sharciga Moore wuxuu ku muujiyay daacad ah inaysan macquul ahayn muddo labo sanno ah si loo isticmaalo Windows 7 iyaga oo aan nalooga arkaynin taariikhda. AutoCAD 2013 horay ayuu u dhawaaqay golaha, walina weli ma aan calalin Maxaa Cusub ee AutoCAD 2012, ku dhowaad wax kasta oo maanta ah waa la tuuri karaa, iftiin, waa in Dukumentiyadayda, ee USB, boostada ama xitaa daruurta.
Nasiib darro xawaaraha ay ku socoto geeddi-socodka socda, ma aha had iyo goor xawliga; Tani waxay soo bandhigaysaa caqabad joogta ah sababta oo ah way fududahay in la hirgaliyo tiknoolajiyad cusub; laakiin ma ahan mid sahlan in la bedelo xeerka ama in la dhiso nidaam u isticmaala tiknoolijiyada habka isgaadhsiinta ee xafiisyo kala duwan iyada oo aan sanka ku dhufanin dadka la xiray si ay u badalaan ama u hoggaansamaan siyaasadaha iska horimaadka wanaagsan ama xun.
Bentley ayaa muujisay mawduuca I-tusaale ah laba sano, markii aan xusuusto markii arintaan u muuqatay mid aan caadi ahayn. Sannadkii hore waxaan arki karnaa wax shaqeynaya, sannadkan seddaxaadna waan ku qanacsanahay in aan arko kalsooni wanaagsan oo mowduuc isku mid ah oo ka badan hal cliché uu leeyahay mabda 'falsafadeed oo aad u fiican, oo hoos imanaya magaca "aynu ku noqonno talanti".
Inkasta oo Bentley Systems ay calaamad u tahay -xad-dhaaf ah- hufnaan hal abuur leh, illaa heerka luminta isticmaalka isticmaalaha -ma sigaar cabbin- waa salvageable aan la xidhiidha shaqooyinka xun keeni in dadka isticmaala ay ku ruxruxaa ee la ruxruxo, joogto ah la beddelo jidka shaqada caadiga ah. Waxaan arrintan u aragno sannado on Kitaabkiisa format DGN ayaa dirqi bedelay looga baahan yahay in ay gelinno 16 32, interface user iyo haatan ka taliso fikirka ah I-model u muuqataa in ay xaqiijin dheeraad ah falsafada in.
Maxaa dhacaya waa in ereyga "Aan ku soo laabano tayada"Waxay u muuqataa inaanan si joogta ah ula socon waqtigeena. Ku dhowaad wax kasta waa la abuuray -waxaan aaminsanahay-, laakiin qaar badan oo ka mid ah hindisayaashu hadda ma xallinayaan baahida aan u qabno si waxtar leh. Waxaan leenahay tiknoolajiyo aad u sareeya, waxaanan la xiriiri karnaa caruurteena dhinaca kale ee adduunka adoo si sahlan u riixaya Skype, waxaan la socon karnaa mashruuc la socda TeamViewer, kula sheekeysta gabadha ka soo jeeda moobilka, iwm. Hase yeeshee, waxaan ku adkeyneynaa in aan kumbuyuutarkeena ka ilaalineyno fayruusyada, xiriirka wireless ee leh Windows 7 wuxuu ku dhow yahay ficil rumaysad, waxaana si buuxda kalsooni ugu qabnaa in sannadka soo socda wax walboo muhiim ah.
Tani waxay dhacdaa maxaa yeelay ururinta macaamilka ee leh casriyeynta teknoolajiyadu waa guurka qurba-joogta ah. Aad u yar oo ah waxa hadda ku samaynaa qalab horumarsan dhihi karaa waa waara ee sannadaha 5 mustaqbalka; inkasta oo ay tahay nidaam isku mid ah oo 30 uu sanado ka hor la sameeyo. Waxaan sidoo kale waa mid aad u muhiim ah hababka dhaqameed, waxaan halmaamay in aan warqad marna si toos ah u shaqeeyaan, iyo guud ahaan iloobin macnaha iyo su'aasha labadaas aag UTM sigaar beebka la mid ah la ursado kale.
Jaantuska kore wuxuu muujinayaa saddexda mabaadi 'ah ee soo jeedinta Bentley ee ku soo noqoshada tayada. Anigu waxaan dhib ku qabaa inaan helo Greg si aan ugu laabto sawirka, laakiin ugu dambeyntii waxaan sameeyey mid ka mid ah oo aan si xun u nadiifin gudiga kormeerka; qaabka qaab-dhismeedka wuxuu muujinayaa:
Xogta, waxay keentay qaabka dijital ah ee nolosha dhabta ah.
Isdhexgalka mashaariicda, iyada oo loo marayo iskudubaridaha kala duwan
Hawlaha dhabta ah ee la xidhiidha qaabaynta.
Waxay u muuqan doontaa mid feker ah, laakiin waxay ka tarjuntaa saddexda bentood ee Bentley rajeynayo inay ku adkaysato sanadaha soo socda ee 10:
Microstation, miiska shaqada ee qalabka kala duwan ee injineernimada, dhismaha, dhismaha. Qaadashada DGN fudud si heer kale (I-model) inkastoo weli DGN laakiin kobcinta gundhig isticmaala qalab sida Bentley Map, Power Civil, Plant Open, ama wax kale oo kasta oo waxa ay qabato waa dar model alphanumeric yeelaa.
ProjectWise, sida qalab isku xira. Haddii uu ku jiro USB, dariiqa adag, moobaylka ama dariiqa, waa habka edbintu u dhex gali karto.
AssetWise, sida qalabka maareynta. Tani waa cusub, laakiin waxaa si cad u conceptualized sharciyada this lagu daray in ay dib u qaado model ah inay yimaadaan berrinkii mar, si joogto ah na xasuusinaya in qaabka ay tahay oo keliya raad a beenaale ah xaqiiqada iyo silsiladda adag iska yeelyeel ah madal sabayn 15 Dhulka dibadda.
Nasiib daro ah in Bentley betley ay sii wadi doonto isticmaalkeeda; haddii mid ka mid ah walaalaha la doonayo in ay noqdaan siyaasiyiin ama ay naftiisa ku darsadaan xuriyad diimeed. Laakiin kuwa naga mid ah ee indhaha ku haya habka fekerka, waxaan helnaa waxbarasho qiimo leh oo loogu talagalay dabeecadaha kala duwan ee nolosha; hadda uun waxaan u maleynayaa in ay soo koobaan wax ka mid ah asaasigaas oo leh mugdi ku yaal Amsterdam:
Waxaan u arkaa mid xiiso leh, xoojinta waxa macneheedu tahay in lagu soo celiyo tayada; in in ka badan oo soo bandhigaya xal milmi miiska ee miiska saaran yahay in aan ku riyoodo siyaabo cusub si looga faa'iidaysto Aladdin laydh. Taasna waa in tayada ay ku jirto wax aan ku sameyno qalab caadi ah, si aan u aragno waxa ay sameeyeen "damn"Hoover Dam Bypass waxay naga dhigi kartaa in la iloobo in naqshadeynta la sameeyay qalab sahlan sida Microstation, ma aha in lagu xuso Expressway Bridge Design ee Hybrid AutoCAD / Microstation of Lu Zhuojun.
Ku laabashada talanti macnaheedu waa fikir ka baxsan. Ka dib markii sannado 3 aan ugu dambeyntii aan fahamsanahay waxa ay ku tilmaameen I-model, ma aha sababtoo ah waxay ahayd qiiqa qiiqa laakiin sababta oo ah wuxuu ka horreeyay Charlotte sannad-kii 2008. Waa wax xiiso leh -iyo aan caadi ahayn- oo dhan waxay ku sameeyeen la AutoDesk, raadinayso malaayiin users of format billabo / DXF, inkastoo faa'iidada in dambe ma saami tan iyo I-model keliya baa la samayn karaa shaqada software Bentley, mana isticmaali doonaan AutoCAD isticmaalayaasha Microstation sababtoo ah waxay maqlaan erayga "hypermodel".
Ku laabashada tayada macneheedu waa fekerka ku saabsan isticmaalaha dhammaadka. Yaa waxaan ku odhan lahaa wakhtiga in a file DGN / billabo laga daawan kari waayay ka browser on Windows ama Muuqaalka. Laakiin hadda waa mid dhab ah, waa suurto gal ma aha oo kaliya si aad u aragto dulinka ah in xitaa Google karaa, laakiin sidoo kale Mozilla, digsi, taabto shayga, arki sifooyinka, Layouts ay, waxay isku shaandheyn la arki karo in 3D ama halkii shaqsi (go'doomiyo). Taasi waa sababta oo ah sida aan dareensanaa wakhtigaas, Bentley rajaynayo file uu DGN joojiyay isagoo qaab aan la garanayn dunida, iyo fikirka ah ee user dhamaadka maraya buundada, laakiin ma laha fikrad yar sida loo xisaabiyo jarista L / 4.
Ku laabashada tayada macneheedu waxa weeye ku adkaysiga ujeedadaas. In kastoo istaraatiijiyadu is bedeli karaan, isticmaaluhu waa inuu ogaadaa inaan isla meeshii ku soconayno; Sidii ay ahayd isku daygii aan guulaysneyn ee Microstation Athens, ku dhowaad cidna ma ogeysiisin iyo hadda xidhiidhka la hagaajiyay ee aan haysanno tan iyo markii XM ay aqbashay isticmaalayaasheeda. Si la mid ah, kalsoonida I-model waa in la ilaaliyaa inkastoo xaqiiqda ah in fikradda BIM aan weli la iibin karin; laakiin dhaqdhaqaaqa xogta ayaa hadda furan albaabada si loo xoojiyo fikradda inkastoo ay noqon doonto magac kale -Waxaan jeclaan lahaa oo aanan iBIM, ma aaminsano sababta oo ah Shaqooyinku way dhinteen-.
Waqtiga wanaagsan ee Bentley Systems, iibsiyada dhowaan (Pointools, Raceway, AECOSym) kaliya waxay xaqiijinayaan in ay go'aaminayaan in ay isticmaalaan isticmaalkooda iyagoo raadinaya hal-abuur joogto ah, waayo talanti. Isbahaysiga hadda la leh Microsoft, Adobe iyo suurtogalka ah ee Google mustaqbalka ayaa gacan ka geysanaya in ay yeeshaan saameyn weyn.
Kaliya ku celcelinta waxa uu yiri laba sano ka hor: Bentley ilaa I-model Waxaan rabay taas Aynu aqbalno dgn sida pdf-ka caan ah. Waxaa suurtogal ah in software-kaaga uusan gaarin dukaanka, kaliya inuu ka soo baxo sanduuqa, laakiin waxa muuqata in ay tahay natiijada natiijooyinka soo saarey alaabtaada waxaa arki kara qof fahmaya dunida dhabta ah.
Post Previous«Previous Ma lahaan doonaa Microstation for Mac?
Post Next Contours AutoCAD - From Data Total StationNext »